China KF86 Intelligent Relay Ule Nleta na-emepụta na suppliers | Kingsine
Ìhè dị mfe: 10kg, obere obere nfe dị mfe na njem ụgbọ elu.
6x30A, 6x310V ụzọ analog mmepụta.
Kọmpat 6-adọ ọsọ agba anọ ule set na elu ziri ezi & zuru ngwọta (agbaso IEC61850 sampled uru na GOOSE), n'ụzọ zuru ezu izute niile chọrọ maka nchọpụta na debugging nke IEC61850 IEDs, jikota Units, ọdụ akara usoro na omenala nchebe relays.
● Iji analog (voltage 6x310V, 6x30A ugbu a) na ozi IEC61850 SMV n'otu oge na-apụta.
● Wuru na-dual-isi CPU ulo oru kọmputa, wuru na-nnukwu-ikike SSD siri ike mbanye; sistemụ agbakwunyere Windows 7; 9.7-inch ezi agba LCD ihuenyo, 1024 × 768 mkpebi, ihuenyo mmetụ ọrụ. Nwere ike ịrụ ọrụ na ntanetị ma ọ bụ n'ịntanetị;
● Nye 8 ụzọ abụọ nke LC ngwa anya ọdụ ụgbọ mmiri, ike nnyefe na-enweta 36 ọwa nke IEC61850-9-1, IEC61850-9-2 etiti format sample ụkpụrụ; na ngwa anya ike ule ọrụ.
● Nye 6 ST mmepụta optical ọdụ ụgbọ mmiri na 2 ST enweta ngwa anya ọdụ ụgbọ mmiri, nke nwere ike mmepụta 6 tent nke sampled uru ozi kwekọrọ na IEC60044-7 / 8 (FT3) format; nwere ike ịnata usoro 2 nke FT3 usoro IEC60044-7 / 8 nkọwapụta Okwu ozi bara uru;
● Nwere ike ịdenye aha / bipụta ozi GOOSE ma ọ bụ rụpụta, nata ngbanwe, ma chọpụta nnwale mgbochi mmechi;
● Ulateomie 12-ọwa ala larịị mmepụta nwalee nchedo nke ala ozo ndenye;
● Malite iji mee ka IED jiri aka ya hapụ GOOSE, akara ngosi uru, iji kpochapụ usoro nrụgharia nke ngwaọrụ n'okpuru ule kpatara nkwụsị njikọ mgbe ule ahụ kwụsịrị;
● A na-atụle ntinye aka n'ọdụ ụgbọ mmiri anya ma ọ bụ GOOSE nwere ike ịkọwa ya kpamkpam; Otutu ihe di iche iche nke GOOSE ichikota ihe omuma nwere ike idenye aha / biputa;
● Ọrụ ntanetị bara uru, ọnụ ọgụgụ nke ọwa nwere ike ịtọ n'efu, ruo na 36 ọwa nwere ike ahazi;
● Na akpaghị aka bubata faịlụ SCL (SCD, ICD, CID, NPI) iji ghọta nhazi akpaka nke ụkpụrụ atụpụtara na ozi GOOSE, ma chekwaa ụkpụrụ nnomi na ozi nhazi GOOSE dịka faịlụ nhazi maka ule
● Ọ nwere ike na-akpaghị aka ịchọpụta ngwa anya dijitalụ n'ókè si MU, ngwaọrụ nchedo na ọgụgụ isi ọrụ igbe, na-aghọta akpaka nhazi ọrụ nke nlele uru na GOOS ọmụma;
● Nwere ike ime ka ọnọdụ dị iche iche dị iche iche (ọnwụ, nsogbu, adịghị mma dị mma, nnyefe ozi, data anomaly, enweghị usoro, wdg);
● Enwere ike ịtọ njirimara ọwa nke ozi SV mmepụta, yana sistemụ ịme anwansị nwere ike ịkọwapụta ma dezie ya, tọọ ka ọ ghara ịdị irè, tọọ ka ọ gaa steeti, ma nwee ike ịmekọrịta nkwekọrịta AD abụọ na ule ndị ọzọ.
● Oghere usoro GPS / Beidou arụpụtara na GPS, oge mmekọrịta mmekọrịta IRIG-B;
● Ngosiputa ule ngwanrọ egosiputara, AC, usoro onodu, ule nyocha, nchedo anya, nchedo overcurrent, oge mmeghari oge, nchedo usoro efu, ule uzo, uzo ike, ule di iche, ule di iche iche, mekorita ngwanrọ software
● Na ọrụ ule unit, ị nwere ike nwalee unit si nkenke, oge ziri ezi, n'oge ziri ezi, na data nnyefe na ule ọrụ.
● Kwado ngosipụta eserese nke faịlụ SCD, akụrụngwa nwere ike gosipụta mmekọrịta mmekọrịta ngwaọrụ IED na njikọ njikọ arụmọrụ mebere.
● Site na ọrụ nnyefe koodu IRIG-B, mgbe ejiri GPS nke mpụga, enwere ike iji ya dị ka ngwaọrụ oge.
AC dị ugbu a
Njupụta & Ike
6 × 30A @ 90VA max nke ọ bụla;
3 × 60A @ 180VA max nke ọ bụla;
<0.02% Rd + 0.01Rg Ndenye. @ 0.5A ~ 20A
Nso m: 2A
Nso II: 30A
<0.025% Agụụ. / <0.07% Guar.
Ascends / agbago nzaghachi
DC Ugbu a
AC voltaji isi iyi
6 × 310V @ 65VA max nke ọ bụla
<0.015% Rd + 0.005Rg Ndenye. @ Chukwuebuke ~
<0.04% Rd + 0.01Rg Guar. @ Chukwuebuke ~
Nso m: 13V
Nso II: 310V
<0.015% pdị. / <0.05% Guar.
Isi DC Voltaji
Frequency & adọ n'akuku
DC ~ 1000Hz, 3000Hz na-agafe agafe
Mkpebi ugboro ugboro
-360 Celsius ~ 360 Celsius
Oge ziri ezi
<0.02 Celsius. / <0.1 ° Guar. 50 / 60Hz
Ntinye ọnụọgụ abụọ
8 ụzọ eletrik abụọ dịpụrụ adịpụ
5 kΩ… 13kΩ （Ihe efu kọntaktị）
0 V ～ 300Vdc Ma ọ bụ kọntaktị akọrọ(Ọnụọgụ abụọ ntinye tụgharịa nwere ike ịbụ programmable)
0 ~ 25ms (Software njikwa)
Ọnụọgụ abụọ mmepụta
4 ụzọ abụọ, Ọsọ ọsọ
Banana ụdị 4.0mm
AC ezumike ikike
Ike ezumike DC
Di na nwunye niile dịpụrụ adịpụ
Mekọrịta ọdụ ụgbọ mmiri
1 × SMA ， Jiri maka mpi mpi GPSNkwado GPS na Satọde Satid
2 × ST ， 1 maka nnyefe, 1 maka nnata
1 × 6Pin 5.08mm phoenix ọnụ1 maka nnyefe, 1 maka inweta
Mmekọrịta na-akpali mpụga
1 × 4Pin 5.08mm phoenix ọnụntinye akpalite mpụga + mmepụta mputa mpụga
Nkwurịta okwu interface
Inbuilt WIFI DHCP ọrụ
9.7inch LCD, ihuenyo mmetụ
Igodo nọmba + igodo ntụzịaka
Elu ọnụ Frequency
Ikwenye ugboro ole
Ogwe ọkọlọtọ AC 60320
5 ～ 95% ， Na-abụghị odide
80kPa ～ 110 kPa t elu 2000m ma ọ bụ obere）
N'ụzọ zuru ezu imezu IEC61850 plele uru na Gaa; (IEC61850-9-1, IEC61850-9-2 / (LE), IEC60044-7 / 8)
Nwere ike imepụta ihe nlele na akara analog n'otu oge, ma ọ bụ onye debanyere aha ma bipụta ozi ọma na ozi ọma na ọrụ kọntaktị I / O.
Ruo 36 nlele uru ọwa nwere ike ịdepụta.
Eriri ọdụ ụgbọ mmiri (LC ụdị)
100Base-FX (100Mbit, Fiber, duplex zuru ezu)
8 ụzọ abụọ
62.5 / 125μm (Otutu-mode eriri, oroma)
SPD Green (ọkụ): njikọ njikọNjikọ \_ AcT Yellow (blinking): mgbanwe data
Eriri Oghere Usoro ọdụ ụgbọ mmiri (ST ụdị)
6 maka nnyefe, 2 maka nnata
12 Ọkwa dị ala na-egosi ọrụ mmepụta ọrụ:
Mbupụta mgbaàmà ala dị ala
Mmepụta ọdụ ụgbọ mmiri ụdị
Ọrụ: 0 ～ 8Vrms
Max mmepụta ugbu a
Izi ezi oge
0.002% frequency Nkịtị ugboro）
0 ～ 359,9 Celsius
± 0.1 Celsius
Nke gara aga: KF900A Portable Intelligent IEC61850 IEDs Analyzer Test
Osote: K3063i Universal Relay Test Set
Nyocha nke Digital, Nchekwa ọsọ agba anọ Tester, Anya Nchekwa ọsọ agba anọ Tester, Relay Test, Esi esi agba anọ Tester, Ọgụgụ ọsọ agba anọ Tester, Ngwa niile